တောမီးမြားကွောငျ့ ကယျလီဖိုးနီးယား အမြိုးသားသဈတောမြားအားလုံး ပိတျထားမညျ - Xinhua News Agency
အမရေိကနျနိုငျငံ တောငျကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျ Riverside ကောငျတီတှငျ တောမီးလောငျကြှမျးမှုအား မီးသတျသမားမြား ငွှိမျးသတျနကွေစဉျ (ဆငျဟှာ)
လော့ဈအိနျဂလြိဈ၊ ဩဂုတျ ၃၁ ရကျ (ဆငျဟှာ)
အမရေိကနျနိုငျငံ စိုကျပြိုးရေး သဈတောလုပျငနျးဝနျကွီးဌာနက ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျရှိ အမြိုးသားသဈတော ဧက သနျး ၂၀ (၈၀,၉၃၇ စတုရနျးကီလိုမီတာခနျ့) တှငျ အမြားပွညျသူဝငျရောကျခှငျ့အား ဩဂုတျ ၃၁ ရကျ သနျးခေါငျမှစ၍ သီတငျးပတျနှဈပတျကွာ ပိတျထားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အာဏာပိုငျမြားအနဖွေငျ့ “လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ ကယျလီဖိုးနီးယား တောမီးအကပျြအတညျးကွောငျ့ အမြားပွညျသူနဲ့ မီးသတျသမားတှေ ဘေးကငျးရေး ပိုမိုပံ့ပိုးပေးဖို့” ခကျခဲသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ခမြှတျရခွငျးဖွဈကွောငျး ကယျလီဖိုးနီးယား ဒသေဆိုငျရာ သဈတောအမှုထမျး Jennifer M. Eberlien က ဩဂုတျ ၃၀ ရကျတှငျ ထုတျပွနျသော ကွညောခကျြ၌ ပွောကွားထားသညျ။
ယငျးသို့ ပိတျသိမျးမှုသညျ ဩဂုတျ ၃၁ ရကျမှ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျအထိ စီစဉျထားကွောငျး ထုတျပွနျခကျြက ဆိုသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့သီတငျးပတျက မွောကျကယျရိုလိုငျးနားပွညျနယျရှိ သဈတောလုပျငနျး၏ အမြိုးသားသဈတော ၉ ခုကို ပွညျနယျတဈလြှောကျရှိ တောမီးအခွအေနေ အလှနျဆိုးဝါးလာသဖွငျ့ ပိတျထားခဲ့ရကွောငျးနှငျ့ နိုငျငံတဈဝနျးရှိ မီးငွှိမျးသတျခွငျး အရငျးအမွဈမြားကိုလညျး ကွိုးပမျးလုပျဆောငျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ (Xinhua)
LOS ANGELES, Aug. 30 (Xinhua) — The United States Department of Agriculture Forest Service will close all 20 million acres (some 80,937 square km) of California’s national forests to public for two weeks from Tuesday midnight.
A statement signed Monday by California’s Regional Forester, Jennifer M. Eberlien, said the authority had made the difficult decision “to better provide public and firefighter safety due to the ongoing California wildfire crisis.”
This closure was scheduled to start from Tuesday and to expire after Sept. 17, the statement said.
Last week, Forest Service’s nine national forests in Northern California had been closed due to extreme fire conditions throughout the state and strained firefighting resources throughout the country. Enditem
Photo: Firefighters battle againstawildfire in Riverside County of Southern California, the United States, Aug. 2, 2020. (Xinhua)
တောမီးများကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယား အမျိုးသားသစ်တောများအားလုံး ပိတ်ထားမည်
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဩဂုတ် ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေး သစ်တောလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသားသစ်တော ဧက သန်း ၂၀ (၈၀,၉၃၇ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်) တွင် အများပြည်သူဝင်ရောက်ခွင့်အား ဩဂုတ် ၃၁ ရက် သန်းခေါင်မှစ၍ သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် “လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တောမီးအကျပ်အတည်းကြောင့် အများပြည်သူနဲ့ မီးသတ်သမားတွေ ဘေးကင်းရေး ပိုမိုပံ့ပိုးပေးဖို့” ခက်ခဲသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား ဒေသဆိုင်ရာ သစ်တောအမှုထမ်း Jennifer M. Eberlien က ဩဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
ယင်းသို့ ပိတ်သိမ်းမှုသည် ဩဂုတ် ၃၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်အထိ စီစဉ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှိ သစ်တောလုပ်ငန်း၏ အမျိုးသားသစ်တော ၉ ခုကို ပြည်နယ်တစ်လျှောက်ရှိ တောမီးအခြေအနေ အလွန်ဆိုးဝါးလာသဖြင့် ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်း အရင်းအမြစ်များကိုလည်း ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ပုံစာ – အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Riverside ကောင်တီတွင် တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုအား မီးသတ်သမားများ ငြှိမ်းသတ်နေကြစဉ် (ဆင်ဟွာ)
#US #California #Forest #Wildfires #Xinhua #Myanmar #XinhuaMyanmar #အမေရိကန် #ကယ်လီဖိုးနီးယား #သစ်တော #တောမီး #ဆင်ဟွာ